Laga soo bilaabo atariishada ilaa haweeneyda ganacsiga, waa kuma Emmanuelle Keïta? - TELES REELAY
Wanda People, Kooxda Wanda waxay kuu keeneysaa maanta daahfurka Emmanuelle Keïta, atariisho hore hadana mid ka mid ah haweenka ganacsatada ah ee ugu caansan Côte d'Ivoire.
In kasta oo aan loo waayin jilaayaasha iyo aktarada filimka ee Ivory Coast, sida Gohou Michel ama Emma Lohoues, waxaa jira mid calaamadeeyay maskaxda sheekooyinka sheekooyinka oo wali ku sii socda maanta iyada oo loo marayo hantideeda kale ee kala duwan.
Emmanuelle Keita runti waa atariisho hore oo Ivorian-Mauritania iyo moodel ah oo sababtay dareen iyadoo ku ciyaareysa taxane iyo xayeysiisyo badan. Soo-saarkii runtii ka dhigay iyada inay ogaadaan dadweynaha guud waa taxanaha Ivorian Dr. Boris, kaas oo laga sii daayo kanaallada pan-Africa sida Tv5 iyo 3Atélésud. Kadib waxay ciyaartay doorkii Clara, kii hore ee Dr. Boris, oo ay gabi ahaanba rabto inay soo kabato.
Emmanuel Keïta sidoo kale wuxuu kamid ahaa jilayaasha Bandhigga Gohou, sitcom heer sare ah oo laga sii daayo kanaalka Trace Tv, halkaas oo ay ka ciyaartay doorka haweenka ee hogaaminta weyn Gohou Michel. Laakiin inkasta oo xirfaddiisa ay ku korayso guul, Emmanuel Keïta wuxuu ku dhacay jacayl wuxuuna go'aansaday inuu wax walba u dhigo Abidjan si uu ugu biiro ciyaaryahanka kubada cagta. Kafoumba Coulibaly kaasoo ka ciyaaray France, naadiga Nice.
Waxyar kadib markay guursatay, jacaylkoodu wuxuu qaatay biyaha markii Kafoumba Coulibaly loo wareejiyay Turkiga naadiga Kasimpasa isla markaana uu ku dhaawacmay ciyaartiisii ​​ugu horreysay. Emmanuelle Keïta, oo laba caruur ah u laheyd ciyaaryahanka kubada cagta, ayaa masaafo dheer qaadata waxayna bilaabeysaa ganacsi abuur
Furiinka, waxay abuurtaa astaanteeda Ku saabsan EK Empire iyo suuqyada khafiifiya corsets, dahabka guridda, iyo adeegyada daryeelka maqaarka.
Maanta, Emmanuel Keïta waa haweeney ganacsade ah oo ku xigta oo ay ku xigto in ka badan macaamiisha 200K barta Instagram. Waxay sidoo kale ahayd qurxinta iyo matxafka ku hadla luuqadda Faransiiska ee barnaamijka moobiilka Thriller tan iyo bishii May ee la soo dhaafay.
Laakiin in ka badan haweeney ganacsade ah, Emmanuelle Keita sidoo kale waxay ka sarreysaa dhammaan "af weyn". Haweeneyda yari runtii run ahaan waxay inta badan udub dhexaad u tahay wararka ku saabsan isku dhacyadeeda soo noqnoqda ee xiddigaha. Sidaas ayaanu ku xasuusanaa a kiiska xatooyada ayaa ka horyimid Ivorian YouTuber Yvidero. Waxay si cad oo aan xad lahayn ugu eedaysay majaajiliistaha shabakada inuu khayaanay mashruucii "Qirashadii" nin dhalinyaro ah oo ka codsaday inay ka caawiso sidii uu u rumayn lahaa.
Sidoo kale, Emmanuelle Keita dhibaato aan sidaa usii fogeyn ayaa soo maray remonstrances of Tuhun 95, ka dib markii ay ku dhiirrigelisay gabdhaha yar yar ee duruufaha adag ku jira in aysan diidin horumarka “Sugar Daddy”. In kasta oo ay ku talisay inay aqbalaan dalabkooda oo ay ka qaataan lacag iyaga, rapper-ka kama uusan labalabeyn, intii dooddu socotay, inuu dhaleeceeyo fikirka saameynta:
« Ma jiraan wax ka badan bani-aadminimada, ujeedo, iyo firfircoonida haweeneyda inay ka ahaato xiriir halka ay kaliya ugu adeegto qancinta libido ee nin duq ah. Wuxuu yidhi.
Ugu dambeyntiina goor dhaweyd, Emmanuelle Keita ayaa weeraray humoriste reer Congo ah Nuux lunsi, oo bilaabay wicitaan lagu qaadacayo "Noheezy Show", bartiisa tooska ah ee Instagram oo mabda 'ahaan ka kooban tahay in gabdhaha laga dhigo qoob ka ciyaarka ama twerk ee dharka geesinimada leh:
« this ma ahan isku dhac ama buuq xun oo la doonayo ! Haweeneyda ganacsadaha ah ayaa ka hadashay baraha bulshada. Kaliya waxaan rabaa inaan soo jiito dareenka kaqeybgalka badan ee soo noqnoqda ee beesheyda tooska ah ee Instagram 2 cents (gorgortanka 1) ee ninkaan dhalinyarada ah, halkaasoo haweeneyda si buuxda loo qiimeeyay laguna tuuray ciqaab caan ah! Waxaan maqlaa inay iyagu ku kacaan rabitaankooda, laakiin fikradda toosan ee nolosha waa macabre, ka-qaybgalayaashuna waa kuwo aan caqli-gal ahayn oo raadinaya buuq! Waxaan ka codsanayaa dhammaan haweenkan (gaar ahaan reer Ioriyaanka) inay ku qaadacaan tamarta ugu dambeysa farriimaha tooska ah ee ninkan dhallinyarada ah. Waxaan leeyahay! Iska ilaali. EK. #noahlunsionteboycotte ".
Si kastaba xaalku ha ahaadee, shaki kuma jiro firfircoonaanta dhalinyarada Ivorian-ka. Waxaan u rajeyneynaa nasiib wacan Emmanuelle Keita dhamaan howlaheeda.
Raac iyada raac Instagram.
Afrika waa inay ku tiirsanaanta ku tiirsanaanta - Jeune Afrique
Sidee Gabon ugaarsataa saraakiisheeda cirfiid -…
In Togo, soo nooleynta in la xaqiijiyo
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.jewanda.com/2021/01/dactrice-a-businesswoman-qui-est-emmanuelle-keita/
Sidee Gabon ugaarsaneysaa saraakiisheeda cirfiidka - Jeune Afrique
VTC: yaa u soo bixi doona "Togolese Uber"?